Sergio Aguero oo ilmeynaya ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Sergio Aguero oo ilmeynaya ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha
Posted by: Ahmed Haaddi December 15, 2021
Himilo – Sergio Aguero ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha kubadda cagta, kaddib xanuun dhanka wadnaha ah. 33 jirkan ayaa u dhaliyay 427 gool xirfadiisa koox iyo waddan wuxuuna kula guulaystay 20 koob oo waaweyn oo uu ku jiro 2021 Copa America.
Aguero ayaa 10-kii sano ee uu u ciyaarayay kooxda Manchester City waxa uu ku soo caan baxay inuu yahay mid ku fiican kubbada cagta. Waxaan dib u milicsaneynaa xirfada quruxda badan ee la arkay Kun Aguero marka la barbardhigo Lionel Messi iyo Diego Maradona.
Laga soo billaabo halyeyga ku guulaystey horyaalka ilaa rikoor jabiye EPL
Markii ugu sarreysay, Aguero wuxuu dhaliyay gool 108-daqiiqo kasta — rikoor Premier League ah. Markii uu ka tagay Manchester City bishii May 2021, isagoo beeca xorta ah ugu biiray Barcelona, ​​weeraryahanka Argentine wuxuu lahaa 184 gool EPL magaciisa. Kaliya Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) iyo Andy Cole (187) ayaa ka badan dhaliyay taasoo ka dhigaysa weeraryahankii ajnabiga ahaa ee ugu wanagsan England.
Aguero ayaa Man City u dhaliyay 260 gool tartamada oo dhan isaga oo si qurux badan u degan goolka hortiisa isaga oo qeexaya waqtigiisa Manchester.
kulankiisii ​​ugu horreeyay ee uu ku ciyaaro guriga ah waxa uu qaabilay Swansea 2011, 2013 wuxuu ku dhameystay qaabilaadii Liverpool xagal aan macquul aheyn iyo seddexleey xusuus leh oo uu ka dhaliyay Bayern Munich (2014), Watford (2017) iyo Chelsea (2019).
Laakiin hal shaqo oo inta kale oo dhan ka xusuus badan Waxay timid May 13, 2012, markii uu gool dhaliyay (92 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi), waxayna xaqiijisay Manchester City inay ku guuleysato horyaalkeedii ugu horreeyay ee heerka koowaad tan iyo 1968.City ayaa ku garaacday Manchester United kaalinta koowaad ee finalka maalinta ugu danbeysa xilliyeedka labada jeer.
Dhammaan goolasha kale ee Aguero — in badan oo ka mid ah ayaa weli qeexaya xirfadda — si kastaba ha ahaatee waa kuwo aan macno lahayn. Guushii cajiibka aheyd ee 3-2 ay ka gaareen kooxda heerka labaad ee Queens Park Rangers.
Waqtiga adag ee Barcelona
Aguero waxa uu ogaa in ku dhawaad ​​hal bil uusan dib u ciyaari doonin kubadda. Kulankiisii ​​ugu dambeeyay wuxuu ahaa 30-kii October markaasoo Barcelona ay barbaro 1-1 ah kula gashay Alaves garoonka Camp Nou kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Barbarahaas, waxaa lagu daaweeyay garoonka dhexdiisa ka dib markii uu la kulmay xanuun laabta ah iyo dawakh ka hor inta aan la bedelin qeybtii nasashada. Saddex toddobaad oo baadhitaanno wadnaha ah ayaa ku xigay waxaana lagu taliyey hawlgab ku salaysan talobixin caafimaad.
Dib u milicso, Aguero kama tagi doono Camp Nou isagoo leh xasuus badan. Waxa uu ku biiray dhabarka Manchester City guuldaradii niyad jabka lahayd ee finalka Champions League ee Chelsea kaga soo gaartay Porto.
Kadib, wax ka yar seddex bilood ka dib markii uu saxiixay, saaxiibkiis dhow ee Lionel Messi ayaa u dhaqaaqay Paris Saint-Germain, bixitaanka Aguero ayaa lagu tilmaamay “xanuun”.
Lixdii bilood ee uu joogay Camp Nou, Aguero waxa uu ciyaaray kaliya shan kulan tartamada oo dhan. Malaha waxa kaliya ee ugu muhiimsanaa (haddii xataa lagu magacaabi karo taas) waxay ahayd qalbi qaboojin soo daahay kulankiisii ​​ugu horeeyay ee El Clasico, laakiin guuldaradii 2-1 ee Barcelona ayaa ka dhigtay yoolka mid aad u qadhaadh.
Hadal jeedintiisii maanta la sugayay waxa ay ahayd sidan:
“Waxaan go’aansaday inaan joojiyo ciyaarista kubbadda cagta, waa waqti aad u adag, go’aanka aan qaatay, waxaan u qaatay caafimaadkeyga, sababtoo ah dhibaatadii aan qabay bil iyo bar ka hor.
“Waxaan ku jiray gacanta shaqaalaha caafimaadka, waxayna ii sheegeen waxa ugu wanaagsan inay tahay inaan joojiyo ciyaarta, marka 10 maalmood ka hor waxaan qaatay go’aankaas, waxaan rabaa inaan qof walba u sheego inaan sameeyay wax walba oo suurtagal ah si aan u yeesho rajo laakiin ma aysan jirin in badan.
“Aad ayaan ugu qanacsanahay xirfadda aan soo maray, waligey waxaan ku riyoon jiray inaan ciyaaro kubada cagta”…
“Weligay kuma fikirin inaan Yurub tagi doono, sidaas darteed waxaan rabaa inaan qof walba u muujiyo mahadnaq, laga soo bilaabo Atletico Madrid, oo aniga sharad igu gashay markii aan 18 jir ahaa, ilaa Manchester City, dhammaantiin waad garanaysaan sida aan u dareemayo Man City. , aad ayaan ugu mahadnaqayaa inay si wanaagsan ii daryeeleen.”
W.Q:Hanaa Maxamed Maxamuud
Previous: Maxaad kala socotaa rikoorka xun ee kabtanimada Arsenal
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 106aad